Vaovao - Fampidirana ny fantsona famatsian-drano PE
Ny resina polyethylene dia akora fototra indrindra amin'ny fitaovana, aorian'ny fantsom-panafody manome rano polyethylene fantsona antsoina hoe fantsakan-drano PE.
Fitaovana famokarana sodina rano PE?
Alina famokarana Como. Ny fitaovana dia amboarina miaraka amin'ny haitao mandroso indrindra eto an-tany, miaraka amina haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha, fanalefahana antonony, fanapahana habeny mandeha ho azy, fanaraha-maso ny fizotry ny famokarana ny fampivoarana avo lenta.
PE fantsona amin'ny fampiharana ny fenitra?
Fenitra nasionaly GB / T 13663-2000.
Inona no loko ambonin'ny fantsom-panafody PE
Mainty indrindra ny loko amboniny, ary vitsivitsy mila fotsy. Ny fantsona mainty dia misy tadiny manga mahavariana eo amboniny.
Inona avy ireo famaritana vokatra momba ny fantson-drano PE?
Fanerena nominal: 0.4mpa, 0.8mpa, 1.0mpa, 1.25Mpa;
Savaivony ivelany: φ25 ~ φ1600mm.
Fanerena nominal: 0.6mpa, 0.8mpa, 1.0mpa, 1.25Mpa, 1.6mpa;
Savaivony ivelany: φ32 ~ φ1800mm.
Toetra mampiavaka ny fantson-drano PE?
(1) Hery lehibe, fanoherana henjana tontolo iainana tena tsara fanoherana, fanoherana tsara.
(2) Ny hamafiny sy ny fahaizany manovaova, ny fahaiza-mampifanaraka matanjaka amin'ny fototra tsy mitongilana sy ny fifindra-monina, ary mahazaka horohoron-tany, rivo-doza ary tontolo iainana masiaka hafa.
(3) Manana fanoherana toetr'andro tsara (ao anatin'izany ny fanoherana uv) sy ​​ny fitoniana maharitra maharitra.
(4) fanoherana ny harafesina, tsy mila manao fitsaboana anti-harafesina, androm-piainana maharitra.
(5) malama ny rindrina anatiny, kely ny fanoherana ny fikorianan'ny rano, lehibe ny fahafahan'ny fivezivezena ary voatahiry ny vidin'ny fananganana.
(6) fanoherana tsara akanjo ary fanoherana fanoherana.
(7) Ny fanoherana ny fihenan'ny maripana ambany dia tsara, mety ho eo amin'ny mari-pana amin'ny -20-40 ℃ azo antoka, ny ririnina dia tsy voakitika.
(8) Ny fifandraisana mandrendrika herinaratra (na miempo mafana) dia mety sy azo antoka, fananganana sy fikojakojana mety (mandritra ny fotoana tsy ahafahana manapaka ny rano).
(9) Izy io dia mety tanteraka amin'ny fomba fanamboarana ny fitrandrahana nentin-drazana sy ny teknolojia tsy misy trench vaovao toy ny jacking fantsom-pako, fandavahana lalana, lining, fantsom-pantsaka ary fidoboka anaty rano.
(10) Ny akora polyethylene tsy misy afa-tsy karbona, hidrôzenina singa roa, tsy mampidi-doza amin'ny vatan'olombelona.
(11) Ny fampiasana haitao nanoherana bakteria nano, manakana ny fitomboan'ny ahidrano, bakteria ary holatra, dia fiarovana maitso, salama ary voajanahary amin'ny fantsom-drano fisotro
1. Fifandraisana azo itokisana: ny fantson-drano famatsian-drano polyethylene dia ampifandraisina amin'ny alàlan'ny fikotrana mafana elektrika; Fifandraisana amin'ny flange amin'ny fantsona hafa, mety sy haingana.
Roa, fanoherana ny fihenan'ny maripana ambany dia tsara: ny hafanan'ny polyethylene maripana ambany dia ambany dia ambany, azo ampiasaina soa aman-tsara amin'ny maripana -35 ℃ -60 ℃. Amin'ny fananganana ririnina, ny fantsona dia tsy hitresaka noho ny fanoherana tsara ny fitaovana.
Telo, fanoherana ny harafesina simika tena tsara: ny fantsom-pandrefesana HDPE dia mahazaka ny harafesin'ny haino aman-jery simika isan-karazany, ny fisian'ny akora simika amin'ny tany dia tsy hamokatra vokadratsin'ny fantsona.
Fahaefatra, fanoherana fahanterana, androm-piainana lava: ny fantsona polyethylene misy fizarana black black karbonika dia azo tehirizina any ivelany na ampiasaina mandritra ny 50 taona, tsy ho simban'ny taratra ultraviolet.
Dimy, tsara miolakolaka: NY fahafaha-mitantana ny fantsona HDPE dia manamora ny hiondrika, ny injeniera dia afaka mandingana ny sakana amin'ny fanovana ny làlan'ny fantsom-panafody, amin'ny fotoana maro, ny fahafaha-manitsy ny fantsona dia afaka mampihena ny fantson'ny fantsona ary mampihena ny vidin'ny fametrahana.
Fanoherana ambany: ny fantsom-panafody HDPE dia manana faritra anatiny milamina ary coefficient an'ny Manning 0,009. Ny faritra malama sy ny tsy mampiraikitra ny fantsona HDPE dia mamela ny fahafaha-mitatitra avo kokoa noho ny fantsona mahazatra, ary mampihena ny fahaverezan'ny tsindry sy ny fanjifana rano.
Fito, mora fikirakirana: maivana kokoa ny fantsom-piaramanidina HDPE noho ny fantsom-beton, fantsom-pohy sy fantsom-by, mora kokoa ny mitantana sy mametraka azy, mihena be ny vidin'ny fametrahana ny tetikasa.
Valo, fomba fanamboarana isan-karazany: fantsom-pamokarana rano HDPE, ankoatry ny fomba fitrandrahana nentim-paharazana ho an'ny fananganana, fa afaka mampiasa teknolojia vaovao tsy misy trenchless toa ny jacking pipe, drilling directional, lining, manapotipotika ny fananganana fantsona, koa ny fampiharana fantsona HDPE dia misimisy kokoa.